Ambalavao : Nojerena manokana ny tantsaha -
AccueilRaharaham-pirenenaAmbalavao : Nojerena manokana ny tantsaha
28/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Asa fa tsy kabary. Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ataon’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Taorian’ny fanomezana fotodrafitrasa maro tao amin’ny Faritra Matsiatra Ambony, ny faran’ny herinandro teo dia nitohy tao amin’ny distrikan’Ambalavao, tao Vohitsambo, tao amin’ny kaomina Ambinanindovoka izany omaly.
Araka izany, nanolotra fotodrafitrasa fototra, mipaka avy hatrany amin’ny vahoaka, ny Filohan’ny Repoblika tamin’izany. Fotodrafitrasa eo amin’ny tontolon’ny fambolena satria dia nahazo lakandrano lehibe mirefy 64 km iny faritra iny.
Raha ny fanazavana, dia manondraka tanimbary sy tanimboly hatramin’ny 1 000 ha eo ho eo ity lakandrano vao natolotra sy nasiam-panavaozana ity. Hahazo tombontsoa manokana araka izany ireo tantsaha mpamboly ao amin’ny kaomina Ambinanindovoka sy Anjoma. Anisan’ny mamokatra rahateo iny Ambalavao iny ary mamatsy ireo vokatra amin’ireo faritra maro eto amintsika, indrindra fa ny faritra Matsiatra Ambony sy ny faritra Atsimon’i Madagasikara.
Nanambara ny tompon’andraikitry ny fambolena tany an-toerana fa voavaha ny olan’ny tantsaha. Afaka mamboly indroa ao anatin’ny taona iray ireo mpamboly amin’ny fahazoana ity lakandrano lava dia lava ity.
Anisan’ny singa iray mitondra fampandrosoana eto amin’ny firenena ny tontolon’ny fambolena. “Amin’ny alalan’ny fambolena no ahazoam-bokatra sy ahafahana mifaninana eo amin’ny tontolo ara-barotra sy fanondranana”, hoy hatrany ny tompon’andraikitry ny fambolena any an-toerana.
Voalaza ihany koa fa mitentina 4 miliara Ar ny teti-bidin’ny fanamboarana io lakandrano vaovao ao amin’ny distrikan’Ambalavao io, izay famatsiana avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena.
Marihina fa ny taona 1992 iny lakandrano iny no simba tanteraka ary tsy nisy nijery sy nanamboatra. Ny Filoha Hery Rajaonarimampianina no nahavita fanamby tamin’ny fanarenana izany.